अमेरिकाका कारण तेस्रो विश्व युद्ध ! « Sansar News
अमेरिकाका कारण तेस्रो विश्व युद्ध !
९ बैशाख २०७४, शनिबार १२:५८
अमेरिका सिरिया र रसिया बिचको बढ्दो तनाबले गर्दा विश्वमा रासायनिक युद्धको खतरा बढिरहेको कुरा जनमानसमा अड्कलबाजी भैरहेको बेला एक भविष्यबेत्ताले यस्तै भविष्यवाणि गरेका छन् । अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्म्प रास्ट्रपति बन्नु अघि ट्रम्पको जित सुनिश्चित भएको भन्दै भबिस्यबाणी गरेर चर्चामा आएका भबिस्यबेत्ता क्लेयर वायन्ट भिलेगासले तेस्रो विश्व युद्ध सुरु हुने मिति समेत घोषणा गरेर अन्तर्रास्ट्रिय मिडिया तताएका छन । भिलेगासले सन् २०१५ मै ट्रम्प अमेरिकाको रास्ट्रपति हुने कुराको अनुमान गरेका थिए जुन सत्य साबित भयो ।
डेली स्टारमा प्रकाशित एउटा लेखमा उनले भनेका छन “हामी त्यो भयानक युद्धको एकदम नजिक आईसकेका छौ । ” भिलेगासले तेस्रो विश्व युद्धको प्रमुख कारण नै डोलान्ड ट्रम्प हुने बताएका छन । उनका अनुसार उक्त बिश्वयुद्ध “आवर लेडी फतिमा” को १०० औ जन्मोत्सव १३ मे देखि सुरु हुने भबिस्यबाणी गरेका छन् । उनका अनुसार ट्रम्पले यो युद्धमा आफुलाई शक्तिशाली शासक साबित गर्ने छन । भिलेगासका अनुसार शक्ति रास्ट्रहरुले सिरियामा रासायनिक हमला गर्नेछन । जसले गर्दा रसिया , चीन र उत्तर कोरियामा युद्धको बाताबरण सृजना हुनेछ ।
भिलेगासका अनुसार युक्त युद्ध आगामी मे १३ र अक्टोबर १४ को बिचमा हुनेछ । साथै त्यो युद्धले धेरै मानिस मार्ने तथा त्यस बिचमा अचम्मका खबरहरु सार्बजनिक हुने छन् । भिलेगासले अर्का भबिस्यबाणीकर्ता नास्त्रेदमसको भबिस्यबाणीको समेत समर्थन गरेका छन । नास्त्रेदमसका अनुसार उक्त युद्धमा सयौँ शक्तिहरु लड्ने छन्, हजारौं मान्छे मर्ने छन र बिश्वमा हाहाकर हुनेछ । भिलेगासले उक्त युद्धमा सिरियाली रास्ट्रपति बसर अल असदको बम बिस्फोटमा मारिने समेत घोषणा गरेका छन । जसले गर्दा युद्धले अझ भयानक रुप लिने समेत बताएका छन